I-Muse, isongiwe i-Oyoun | Ukucinga ngokutsha kwenkcubeko
NgoNovemba 6, 2021 12:00 AM - NgoNovemba 21, 2021 18:00 AM
« I-عرض كوميدي مع علاء ابو دياب (برلين) -I-Arabhu yokuma okumnandi-uAlaa Abu Diab
Iimpawu / Impresiones-Umboniso »
I-Muse, iFolded ngumboniso weqela leprojekthi yovavanyo yobugcisa edibeneyo ekwabelwana ngayo phakathi kwamagcisa asixhenxe. Isihloko sibhekisa kwisenzo sokusonga ileta ukuze ifakwe emvulophini kodwa ikwabhekisa kwintetho yeshishini elivaliweyo ngenxa yobunzima, kule meko, intlekele ekuye kwadlula kuyo iimpembelelo zobugcisa ngeli xesha. yokuphambuka kwezentlalo ngenxa yobhubhane wehlabathi.
Kwimida elandele ukuqhambuka kwentsholongwane, uninzi lwabayilayo beza nezinto ezibambela iidijithali kunye nezisombululo zemisebenzi yabo ukusuka kumsinga ukuya kwiindibano zocweyo zokufowuna ukuya kwimisitho ye-3D ekwi-intanethi.
Kuninzi lwethu - umyili okanye abaphulaphuli - imyuziyam ephuma kunxibelelwano lomzimba kunye nokunxibelelana nenyani iyalahleka okanye imfiliba kakhulu kwaye ngokuqhubekayo phakathi kwezixhobo zedijithali, iilaptops kunye neefowuni. Into ehlala ibotshelelwa ukuba ibandakanye zontlanu izivamvo, inciphisa ukubona nokuva. Ukusebenzisana nomzobo kusengozini kakhulu. Kwaye ukudutyulwa komgangatho ofanayo, ulwazi olujolise kwinto enye kuyasigqiba ekuhambeni kwexesha.
Njengesisombululo sovavanyo, 'iMuse, Folded' ibandakanye amagcisa asixhenxe kuyo yonke iBerlin esebenza kubugcisa obubonakalayo kunye nobugcisa beplastiki ukuba bathathe inxaxheba kumjikelo wemisebenzi yobugcisa ethunyelwe ngokwandiswa kwexesha.
Igcisa ngalinye lenze umzobo ophefumlelweyo ngulowo liwufumeneyo kwaye liwuthumele kwigcisa elilandelayo. Kuyo yonke le nkqubo imisebenzi yobugcisa yamkelwa yaza yathunyelwa ngokungaziwa. Oku njengokubonakaliswa okujolise ekuhlutheni umzobo weziko layo kunye nokubonisa impembelelo esisiseko yomfanekiso njengemyuziyam.
Vernissage: Novemba 05.11.2021, 18. 22-XNUMXpm
Umboniso: Novemba 06.11th - Novemba 20.11.2021, 12, 18pm - XNUMXpm
Ukugqiba: NgoNovemba 20.11.2021, 18. 22-XNUMXpm
Zibekele ixesha lokuya kwiVernissage & Finissage Apha.
Zibhukishe ixesha oza kulityelela ngalo mboniso Apha.
Amagcisa athatha inxaxheba:
Igcinwe ngu iGolnare Tabhibhetsade.
Le projekthi ibiyinxalenye ye-#OccupyOyoun.
◥Nceda uqaphele: Ukuthatha inxaxheba kwimisitho e-Oyoun okanye undwendwele imiboniso yethu, kufuneka ube nobungqina bokugonywa / ukuchacha. Iimaski ze-FFP2 zinyanzelekile e-Oyoun de kube esinye isaziso. Olunye ulwazi malunga nembono yethu yococeko inokufumaneka Apha.
E-Oyoun, akukho ndawo yocalucalulo ngokwesini, i-queerphobia, i-transphobia, naluphi na uhlobo localucalulo okanye ucalucalulo olunje ngokuchasa uMnyama, ukuchasa amaSilamsi okanye ubuhlanga obuchasene nobuJuda, kunye naluphi na uhlobo lobundlobongela okanye ubundlongondlongo. I-Oyoun inikezela ngendawo ekhuselekileyo kubo bonke, iforamu evulekileyo yengxoxo kunye nendawo apho sixhasana kwaye simelane. Ukuba kukho umntu / into ekukhathazayo ngexesha lomsitho, nceda uqhagamshelane nelungu labasebenzi bethu abakhoyo ukuze bancede! Ukuba ufuna ukwabelana nathi ngamava emva kwesiganeko, nceda usibhalele i email okanye usithumelele umyalezo ongachazwanga ngegama lethu website
NgoNovemba 6, 2021 12:00 AM
NgoNovemba 21, 2021 18:00 AM